Abavelisi bamandla abavelisi, abaxhasi - iFektri yokubonelela ngombane eChina
Ubunzima bomnatha: Ubungakanani be-63.3g: 75mm (ubude) * 32mm (ububanzi-ububanzi) * 55mm (ukuphakama) Ukupakisha: ibhokisi elingaphezulu nelisezantsi + intambo yamandla Umbala: igolide, bomvu, ipharamitha emnyama: 1. Ujongano: DC + RCA ujongano 2.Impahla: ialuminium alloy 3. Ibhetri yeLithium: 3 550 mAh iibhetri zebhetri 4. Ixesha lokutshaja: ukutshaja okukhawulezayo, iiyure eziyi-1.5-2 zinokuhlawuliswa ngokupheleleyo 5. Ixesha elinokusetyenziswa: phantsi kwesiqhelo ombane we-10V, umbane ozinzileyo unokuhlala iiyure ezi-4 , ngaphantsi kwe-8V yombane, ingasetyenziselwa ngaphezu kweeyure ezingama-4, umbane uzinzile; Ins ...
Iimowudi ezimbini zoLawulo lwaMandla oMbane oDijithali oomatshini beTattoo oMbane oSebenzayo ngoKakayi weTattoo Power Supply 1. Ukunikezelwa kwamandla kuneqhosha lexesha, cofa ukuseta ukuqala nokumisa, cofa ixesha elide imizuzwana emithathu ukuya ekucoceni zero 2. Ngokudibanisa kunye nokususa amaqhosha, cofa ixesha elide ngokuqhubekayo yongeza uthabathe ombane. 3. Yiba nexesha elide kunye nejog ezimbini zokutshintsha. 4. Amaqhosha amane anokucwangciswa ukugcina umsebenzi we-odi yombane wesine. 5. Uguquko lwendlela ezimbini. 6. Umsebenzi wokukhumbula 7. Umsebenzi wexesha leMOLONG TATTOO SU ...
Umgangatho ophezulu weepateni ezibaziweyo zeTattoo Power ezingatyibilikisiyo kuMbane oManzi oMbane weTattoo
Igama lemveliso: Amandla aqingqiweyo Izinto: Umbala we-zinc: Umbala weGolide / Grey / uSliver Gross: 850 g Isiphumo sangoku: 3.4 Isiphumo sombane: 0-18 V Izixhobo: 1 iadaptha, 1 intambo yombane Imiyalelo yokusetyenziswa: 1. Iziphumo Umbane ngu-0-18V, uhlengahlengise umbane ngeqhina; 2. Iziphumo ezikhoyo ziyi-3.4 amperes; 3. Oomatshini ababini be tattoo banokudityaniswa, omnye uyasebenza kwaye omnye ulindile. Cinezela kwaye ubambe iqhosha lokwenza imizuzwana emi-2 ukucima, kunye nesibonakaliso sesibane esiluhlaza ...
Ubungakanani bemveliso; 7.5 * 7.5 * 4.5cm Ubungakanani bebhokisi; 17.5 * 11.5 * 8cm Ubunzima bomnatha; 178g Gross ubunzima; Ukucaciswa kweMveliso engama-416g: unikezelo lwamandla + iadaptha + incwadana yemveliso yeplagi: 1: Ukunikezelwa kwesibane se tattoo esinemibala esixhenxe, ukuqala kwesitshixo esinye, akukho kunyova lufunekayo, kulula ngakumbi kwaye ngokukhawuleza. 2: Jikela ngasekhohlo nasekunene ukulungelelanisa umbane, imibala eyahlukeneyo yokukhanya imele amaxabiso ombane ahlukeneyo. I-3: Isiseko serabha esingatyibilikisiyo, imagnethi eyakhelwe-ngaphakathi, ukufunxa okuqinileyo, efanelekileyo kwiindawo ezahlukeneyo. 4: Uyilo oluqaqambileyo lwezibane, ...
Ukunikezelwa kwamandla oMbane oMbane weLocomotive nge-LCD
Idijithali yamandla ombane wamandla ombane onikezela ngomboniso weLCD. Ukubonelela ngoku ngoku okuzinzileyo okunamandla kunye nokusebenza koomatshini be tattoo. Ukusebenza kakuhle kusasaza ubushushu, ixhasa ukusebenza ixesha elide. Umboniso weLCD weGradient, ufundeka ngokulula ngelixa usebenza. Iqhosha elifanelekileyo lolawulo lwesantya. Iphakheji ibandakanya: 1 x Umatshini weTattoo oNikezela ngoMbane 1 x Iplagi yamandla (ilungele amazwe akho) Inkampani yethu ikhethekileyo kwicandelo le tattoo iminyaka emininzi, ibonelela ngeentlobo zezixhobo ezikumgangatho ophezulu, ...
Umthombo wamandla ombane wedigital Precision HP-2 Tattoo Power Supply
Iyahambelana noomatshini bekhoyili kunye noomatshini beemoto, isebenza ngokuzinzileyo, ngokutyibilikayo, nangaphandle kokuthungwa. Ikwaxhotyiswe ngeebakaki ezikumgangatho ophezulu zealuminium, iikomityi zokutsala, kunye neebhloko zokutsala intsimbi ezinamandla amakhulu, ezinokuthi zifakwe kwitafile yesinyithi. Iimpawu: ulawulo microprocessor ngokupheleleyo yedijithali, kulula ukuyisebenzisa. Uhlengahlengiso olululo lwevolthi yamanqaku ebekiweyo 0-18vdc. 2.3 I-Ampere eyakhelwe-ngaphakathi kumthwalo okhuselekileyo wokuqinisekisa ukhuseleko lomsebenzi we tattoo. I-Liner / Shader icwangcisiwe ngoku ngoomatshini aba-2 okanye oomatshini aba-4 ...